Shirka Dagmadda Cadaado oo khilaaf uu ka taagan yahay. – SBC
Shirka Dagmadda Cadaado oo khilaaf uu ka taagan yahay.
Posted by SBC Editor on April 30, 2015 Comments
Shirka Maamul U Sameynta Gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa ka taagan khilaaf ku aadan habsami socodka shirkaasi, xilli Dowladda Federaalka Soomaaliya lagu eedeeyay inay faragelin toos ah ku hayso shirka Maamul U Sameynta Gobolada dhexe.
Qaar ka mid ah Odayaasha kasoo jeeda Gobolada Dhexe iyo labo xubnood oo ka mid ah saxiixayaasha ayaa shalay ku dhawaaqay inay kala direyn Guddiga Farsamada shirka Maamul U Sameynta Gobolada dhexe oo ay ku eedeeyeen inaysan si siman shaqada u wadin.
Kala derista ay ku dhawaaqeen xubnahaan inay kala direen Guddiga farsamada ayaa muujinaysa khilaafka ka taagan shirka Maamul U Sameynta Gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya oo tan iyo markii Madaxweynaha uu furay uusan laheyn horay u socod.
Sidoo kale Odayaasha ku sugan Magaalada Cadaado ee degan xarunta Shirka ayaa la faray inay ka baxaan halkaasi, maadaama weli Ergo ahaan aan loo soo xulin, oo deeganadooda ay ku noqdaan si beelahooda ay u soo xulaan Ergo ahaana kolkaasi loogu soo diro Magaalada Cadaado.
Khilaafka ka taagan shirka Maamul U Sameynta Gobolada Dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa waxaa asal u ah in Dowladda dhexe ee dalka, gaar ahaan Wasaarada Arimaha Gudaha ay faragelin toos ah ku hayso shirka Maamul U Sameynta Gobolada dhexe.
Magaaalada Cadaado ayaa la ciir ciiraysa dad fara badan oo ka kala yimid Gobolada Mudug iyo Galgaduud, iyadoo ay muuqato maamulid la’aanta shirka.
Guddiga Farsamada ee la sheegay in la kala diray ayaa waayahan dhan waxa ay ka cabanayeen inaysan haysan tasiilaad ay ku socod siiyaan shirka, Sida Uu SBC Usheegay, Gudomiye Ku Xigenka Gudiga Farsamo Ee lakala Diray Maxamed Xaashi Carabe,
Dhinca Kale Wuxuu Xusay ineysan Jirin Wax Kala Daris Ah Oo Lagu Sameeyay Saxiixayaalna Aysan Meesha Keenin Ee Ay U Shaqeeyaan Dowladda Fedralka Somaliya.
Mudug iyo Galgaduud ayaa la doonayaa in loo sameeyo Maamul Goboleed ay ku mideysan yihiin dadka degada labadaan Gobol.